Gidaarka Gallery - Tallaabooyinka lagu abuurayo qaabkaaga | Bezzia
Susana godoy | 12/05/2022 14:00 | Qurxinta qurxinta
Isbeddelka qurxinta sida 'derbiga Gallery' waa mid ka mid ah kuwa ugu cajiibsan oo aad u soo bandhigi karto gurigaaga. Dabcan, mar walba waxaad ku hagaajin kartaa dhadhankaaga, laakiin shaki la'aan waxa aad ku guuleysan doontaa waa inaad ku sharaddo gidaar laga yaabo inuusan lahayn caan ah. Waxaad siin doontaa isaga oo waxaad abuuri doontaa meel ugu asalka ah.
Waa fikrad taas waxay kuu ogolaanaysaa inaad ururiso xaashida farshaxanka, xusuusta noloshaada, sawiro ama wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca, si ay u qurxiyaan booskaas u baahan nolol yar. Markaa, anagoo taas ka duulayna, waxaanu kaa tagaynaa tabaha ama tabaha ugu fiican si aad uga dhigto sidaad filaysay.
1 Ku sharad ururinta cabbirro kala duwan
2 Diyaarso halxiraalaha jir
3 Samee 'Darbiga Gallery' ee ka sarreeya shelf
4 Dooro dalabkaaga 'derbiga gallery'
Ku sharad ururinta cabbirro kala duwan
Waxaan raadineynaa meel hal abuur leh, wax aan raacin xeer la mid ah sida ay u awoodaan in ay dhigaan laba sawir. Si kale haddii loo dhigo, kan ugu aasaasiga ah ayaa loo daayaa si uu nolosha u siiyo wax hal abuur leh. Haddaba, marka hore, ma jiraan wax la mid ah sharad ku saabsan dhamaystirka cabbirro kala duwan. Waxaad dooran kartaa daabacado ku socda fiimyo wax yar ka weyn iyo kuwo kale oo yaryar. Laakiin waa run in ay tahay in labada dhinac isu dheelli tiraan. Ma meel dhigi doontid mid yar iyo shan weyn, sababtoo ah waxay u ekaan doontaa mid aan dheeli tirnayn. Isku mid marka la eego qaababka. Waxaad dooran kartaa loox afar gees ah iyo leydi ah. In kasta oo aan ka hadalno fiimyada, sawiradu qasab maaha inay tagaan, laakiin waxay noqon karaan sawirro ama go'yaal.
Diyaarso halxiraalaha jir
Sidaan soo sheegnay, waxa ugu aasaaska u ah waa in walxaha aad ku yeelan doonto 'Darbiga Gallery' ay ku dhex jiraan jir. Markaa, mid kale oo ka mid ah xulashooyinka aad u leedahay inaad awood u yeelatid inaad nolosha siiso isku-xidhka aad jeceshahay, waa inaad abuurto nooc halxiraale ah. Waxaad ku dhejin kartaa dhammaan looxyada dhulka, si ay u sameeyaan hal gabal. Tani waxay la macno tahay taas waxaad samayn kartaa qaab joomatari oo weyn adoo isku daraya ama ku dhejinaya dhammaan fareemada, cabbirro iyo qaabab kala duwan. Dabadeed, markaad dhulka ku habayso, waxaad geyn kartaa darbiga. Inkasta oo haddii aad door bidayso, waxa kale oo jiri kara kala-soocid u dhexeeya fiimyada waxayna sidoo kale noqon doontaa doorasho kale oo habboon.
Samee 'Darbiga Gallery' ee ka sarreeya shelf
Marka goobtu yar tahay ama aadan rabin inaad ku daboosho gidaarkaas oo dhan xusuus, waxaad mar walba u samayn kartaa hab kale oo ka fudud oo is haysta. Waayo, Waxaad dhigi kartaa shelf ama shelf. Dusheeda waxaad dhigi doontaa sawirada ama fareemooyinka xusuusta aad jeceshahay. Sidan oo kale waxaad abuuri doontaa sawiro badan oo cajiib ah kuwaas oo nolosha siin doona darbigaas ama geeskaas. Mar labaad, ma dhibayso in la isku daro cabbirro kala duwan iyo xitaa muraayado midabyo kala duwan, gaar ahaan marka darbigu cad yahay. Tan iyo markii tani ay abuuri doonto saameyn muuqaal ah oo asal ah.
Dooro dalabkaaga 'derbiga gallery'
Mar walba waxaan soo sheegnay fikradda midabada kala duwan, cabbirrada jir iyo qaababka. Laakiin, maxaad u malaynaysaa inaad doorato inaad ku habboonaato darbiga oo leh qaab isku mid ah midabka iyo cabbirka? Hagaag, waa hab kale oo nidaamku ku guulaysto dhul go'an. Waayo waa in aad dooratid tiro fareemo ah oo aad mid ka mid ah dhigi doonto midigta kan kale ka dibna, wax yar ka hooseeya adigoon ka tagin meel bannaan. Xarigyadu waa inay lahaadaan midab iyo qaab isku mid ah. Dabcan, gudaha waxaad dooran kartaa xasuus, sawirro ama faahfaahin aad rabto inaad sii noolaato. Haddii aad rabto in aad muujiso 'Darbiga Gallery' kaaga, ka dib isku day in aad samaysyadan ka dhigto mid ka duwan midabka derbiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qurxinta qurxinta » Tillaabooyinka ugu fiican ee lagu abuuri karo 'derbiga gallery' adiga kuu gaar ah
Khiyaamooyinka lagu caddeeyo kala-goysyada dhoobada